kulanka Trump iyo kim Jong-un oo laga yaabo in uu hakad ku yimaado - BBC News Somali
kulanka Trump iyo kim Jong-un oo laga yaabo in uu hakad ku yimaado
Wasiirka arrimaha dibedda ee kuuriyada waqooyi ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu marin habaabiniya dadka iyadoo Donald Trump iyo Kim Jong-un ay isku diyaarinayaan in ay noqdaan hogaamiyeyaashii ugu horreyay ee ka socda labada waddan ee kulma.
Hadalladii kululaa ee ay dhawaantan isdhaafsanayeen Washington iyo Pyongyang ayaa u muuqday kuwa sii dabcayay, marka bayaanka haatan ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ku daabacday warbaahinta ay dowladda maamusho, ayaa u muuqanaya mid dhiif leh.
Dowladda Mareykanka ayuu bayaanku ku eedeeyay inay dadka ku marin habaabinayso sheegashada ah in cadaadis dhanka cunaqabateynta ah oo ay dalkaasi saartay lagu gaaray in Kuuriyada Waqooyi ay soo fariisato miiska wadaxaajoodka.
Bayaanku waxa uu su'aal galilyay in Washington ay isku dayayso inay burburiso wadahallada sida adag lagu gaaray, waxa uuna ka digay inaanan si khaldan loo fasiran niyad wanaagga Pyongyang oo aanan loo arkin inay jilicsan tahay.
Madaxweyne Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu wadaa inay kulmaan bilaha soo socda.